‘दाङको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छौ ं’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘दाङको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छौ ं’
‘दाङको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छौ ं’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता April 30, 2018	0 159 Views
उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति दाङ
दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सातवटा गाउपालिका गरी दश स् थानीय तह रहेको जिल्ला हो – दाङ। कृषि क्षे त्रको विकास, प्राकृतिक स्रो त साधनको उचित सदुपयो ग नै दाङको समृद्धिका आधारहरु हुन् । जसका लागि साझा एजे ण्डा र धारणा निर्माणको आवश्यकता छ । दाङको समग्र विकासका लागि दशवटै स्थानीय तहहरुबीच जिल्ला समन्वय समिति दाङले निर्वाह गरिरहे को भूमिकाबारे जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौ डे लसग युगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत छ । –सम्पादक
जिल्ला समन्वय समिति दाङले के –कस्ता गतिविधिहरु गरिरहे को छ ?
जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मे वारीलाई निकै सक्रियताका साथ निर्वाह गरिरहे को छ । जस् तै हामीले पाएको काम र कर्तव्य स् थानीय तहबीचको समन्वयात्मक सम्बन्ध स् थापित गनेर् हो भने निर्माणाधीन विकासे आयो जनाहरुको अनुगमन, नदीजन्य वस् तुहरुको उत्खनन, व्यवस् थापन र जिल्लाका दशवटै स् थानीय तहहरुको पर्यटन विकासका लागि संस् कृति तथा पर्यटन सर्वद्धन समिति गठन गर्ने काम गरिरहे का छौ ं । जसका लागि स् थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम हुदै गइरहे को छ ।
समन्वयकारी भूमिका खासै प्रभावकारी दे खिदै नन् नि ? कि एको हो रो मात्रै हो ?
एको हो रो समन्वयको सम्बन्ध कहिले हु“दै न । स् थानीय तह र समन्वय समितिबीचको समन्वयात्मक सम्बन्ध दो हो रो नै छ । त्यो हुन्छ पनि । तर जिल्लाका हरे क वडास् तरसम्म जिल्ला समन्वय समिति अझै पुग्न सके को छै न । नगरपालिका, गाउ“पालिका प्रमुखहरुसमक्ष हामी पुगिसके का छौ ं । कतै वडा तहमा पनि पुगे को छौ ं । तर कतै अझै वडा तहसम्म पुग्न बा“की छ । जिल्लाको े समग्र विकासका लागि हरे क वडा–वडासम्म समन्वय समिति पुग्नु आवश्यक दे खिन्छ । जसका लागि समन्वय समितिले मात्रै हो इन स् थानीय तहहरु पनि समन्वयका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ । जसरी अहिले जिल्लाको समग्र विकासका लागि साझा एजे ण्डाको कुरा उठिरहे को छ । त्यसरी नै स् थानीय तहहरु आपसी समन्वय र सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो भने समन्वयको अभाव अन्त्य हुनसक्छ ।
दाङमा चर्चामा रहे को राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षक दरबन्दी मिलानको विवाद उस्तै छ । किन समन्वय अभाव भएको ?
जिल्लाको शिक्षक दरबन्दी मिलान र स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद समन्वय अभावका कारण बा“की रहे को जस् तो मलाई लाग्दै न । किनकि यी दुई क्षे त्रको समस् या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पर्याप्त समय, पर्याप्त छलफल र आपसी समन्वय गरिरहे के ा छ । अब कुरो शिक्षक दरबन्दीको , त्यसका लागि अझै हामीले अथक प्रयास गरे का छौ ं । जिल्लाको शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि पे शागत संघसंगठन, सरो कारवाला निकाय र स्थानीय तहहरुबीच पटक–पटक छलफल गरिसके का छौ ं ।
शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि पे शागत संघ संगठन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच नै तालमे ल मिल्न नसके काले जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा स् थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइएको छ । शिक्षक दरबन्दीका लागि गरिएको पटक–पटकको छलफलले निकास पाउन नसक्दा अहिले स् थानीय तहहरुले नै मिलानको जिम्मे वारी लिएका छन् । त्यसका लागि १५ दिनको समयसीमा छुट्याइएको छ । अहिले के कस् तो छ ? त्यसबारे जानकारी लिने क्रममा छौ ं । अब कुरा रह्यो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको , पहिले को जस्तो विवाद अहिले छै न । किनभने राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विस्तारै आफ्नो काम कर्तव्यमा अघि सरिरहे को छ । जसरी हिजो विज्ञापन खो ले र के ही कर्मचारीहरु नियुक्त गनेर् काम अहिले का लागि रो किएको छ । अहिले राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालले तत्कालीन से वा पुरानै हिसाबले सञ्चालन गर्ने र राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो काम कर्तव्य अघि बढाउने सहमतिअनुरुप अस् पताल र प्रतिष्ठानको विवाद के ही हदसम्म समाधान भएको छ भन्न सकिन्छ  ।
भन्न त भन्नुभयो , त्यस् तो दे खिदै न नि ? दरवन्दी मिलान अस्तव्यस्त छ, प्रतिष्ठान र अस्पतालको जुहारी चलिरहे को छ त ?
हिजो चर्किएको जस् तो विवाद, हिजो को जस् तो जुहारी अहिले छै न । शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि पे शागत शिक्षक संगठनहरु एकातिर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्कै तिर एक आपसमा तानातान गरे को पक्कै हो  । राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति र अस् पताल उस् तै हो  । अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा पुराना कानूनहरु स् थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिले काटिसके को अवस् था र नया कानून निर्माण अझै नभइरहे को अवस् थाका कारण यस् तो अस् तव्यस् तता दे खिएको हो  । व्यवस् थापकीय संक्रमणकालकै अवस् था दे खिइराखे को छ । जनप्रतिनिधिहरु भर्खरै आएको अवस् था थियो  । जति बे ला जिल्ला शिक्षा र पे शागत संगठनहरुबीच एक आपसमा विवाद बढ्दै गयो  । त्यस पश्चात स् थानीय सरकारको कानून निर्माण हुन नसक्दा नया शै क्षिक सत्रमा पनि दरबन्दी मिलान हुन सके न । जसले गर्दा अहिले जिल्लाको शिक्षा क्षे त्रमा निकै अप्ठ्यारो परे को छ । जसका लागि स् थानीय तहहरु निकै तदारुकताका साथ लाग्नु आवश्यक छ । हामीले े समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहे का छौ ं ।
अहिले यी दुबै पक्षमा स् थानीय तह, प्रदे श र संघका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको चासो बढे काले चा“डै निकास निकाल्ने गरी समन्वयको काम गरिरहे का छौ ं । प्रतिष्ठानका विषयमा पनि जनचासो बढ्दै गइरहे को र जनदबाब पनि बढ्दै गइरहे काले निर्विवादका साथ शिक्षक दरबन्दी मिलान र प्रतिष्ठान निर्माणको काम सुल्झाउने प्रयासमा छौ ं । दाङको शै क्षिक विकास र स् तरीय स् वास् थ्य से वा आम नागरिकहरुले लिन सक्ने छांै  । जसले गर्दा दाङ समृद्धितर्फ अग्रसर बन्ने र बनाउन सकिने छ । अबको के ही समयपछि यी समस् याहरु नदे खिएलान् भन्ने लागिरहे को छ ।
प्राकृतिक स्रो तसाधनको अबै धानिक दो हन चरम रुपमा भइरहे को छ भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । किन अनुगमन गर्नुहुन्न ?
अनुगमन गर्नु हुन्न कि, अबै ध उत्खनन गर्ने हरुलाई भे टाउनुह“ुदै न कि भन्ने कुरा हु“दै न । अनुगमन पनि गरे का छौ ं । अबै ध चो री निकासी गनेर् हरु पनि भे टिएका छन् । भे टिन्छन् पनि । जति–जति यस् ता अबै ध उत्खननका घटना र समाचारहरु सुनिन्छन् उति–उति नै हामीले सक्रियतापूर्वक अनुगमनको पाटो लाई अघि बढाएको छांै  । बिडम्बना के छ भने जिल्ला समन्वय समितिले आम नागरिकको सहजताका लागि ईआए परीक्षण गरी के ही स् थानको अनुमति दिए पनि ती क्षे त्र भन्दा अन्यत्रबाट उत्खनन गर्ने प्रवृत्तिका कारण दाङमा दो हन अत्यधिक मात्रामा हुने गरे को छ । जिल्लाका २२ वटा खो लाहरुमा नदीजन्य वस् तुको उत्खननका लागि अनुमति दिइएको छ । कतिपय खो लाहरुमा उत्खननका लागि दिएको परिमाणको सम्झौ ता पनि पूरा भइसके को छ । अब ती क्षे त्रमा बन्द गर्ने काम शुरु गर्दै छौ ं भने कतिपयले सम्झौ ता गरे र उत्खनन गरिरहे पनि अनुमति नदिएको स् थानबाट उत्खनन गरे को पाइन्छ । यसले गर्दा अनुमति दिएको स् थानको अनुगमन तीब्रताका साथ सञ्चालन गरी अबै धानिक उत्खनन रो क्ने प्रयास गरिरहे का छौ ं ।
दै निकरुपमा अबै ध उत्खननमा संलग्न साधनहरु पक्राउ गरी कारवाही गरिरहे का छांै  । अबै धानिक उत्खनन अर्थात ढुंगा, गिट्टी बालुवाको चो री निकासी बन्द गर्न जिल्ला समन्वय समितिको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव हु“दै न । जसका लागि स् थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, नागरिक र उपभो क्ताहरु आफै सचे त भएमा मात्रै अबै ध चो री पै ठारी पूर्णरुपमा बन्द गर्न सकिन्छ । तब मात्रै प्राकृतिक स्रो त साधनको सही सदुपयो ग हुन सक्छ । अर्काे कुरा नदीजन्य वस् तु आवश्यकता जनसंख्या बृद्धि जसरी बढिरहे के ा त्यसरी नै यसको माग पनि बढ्दै गइरहे काले स् थायी उत्खननको बन्दो बस् त गर्न निकै आवश्यक छ । हामीले अबै ध उत्खनन बन्द गर्ने भन्छौ ं तर स् थायी उत्खनन क्षे त्र छुट्याउन सके को छै नांै  । जसका कारण अबै ध उत्खनन बढ्ने गरे का छ । सीमित क्षे त्र निर्धारण गरी उत्खनन क्षे त्र छुट्याउन पनि आवश्यक छ । जसले विकास निर्माणलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिन सक्छ । स् थायी उत्खनन क्षे त्रको निर्धारणमा राज्यले नीति निर्माण गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल चलाई राखे को छौ ं ।
अबै ध उत्खनन कारवाहीमा उनै दो हो रिन्छन् कि नया“ भे टिन्छन् ?
नदो हो रिने कुरै छै न । को ही दुईचार पटक कारवाहीमा परे का पनि भे टिन्छन् । को ही नया“ पनि भे टिन्छन् । मै ले माथि पनि उल्ले ख गरिसकें कि हामीसग स्थायी क्षे त्रको बन्दो बस् त छै न । जसले गर्दा अबै ध उत्खननमा संलग्न गाडी घो डा दिनहु“जसो अनुगमनका क्रममा भे टिन्छन् । पहिलो पटक भे टिने हरुलाई सामान्य जरिवाना गरी छो ड्छांै भने दुईदे खि माथि भे टिएकाहरुलाई जरिवाना दस् तुर दुईगुणा बढाउदै लगे का छौ ं ।
जिल्ला समन्वय समितिको आगामी यो जनाहरु के कस्ता छन् ?
हामीले दाङ जिल्लाको समग्र विकासका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटै थलो मा राखे र दाङ जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि साझा धारणा निर्माण गर्न छलफल गरे का थियौ  । सबै को दाङ जिल्लाको विकास लागि साझा धारणा र साझा यो जना निर्माणमा एकमत भई दाङको एकीकृत विकासका लागि आवश्यक गुरुयो जना निर्माणको चरणमा छौ ं । दाङको एकीकृत विकासका लागि अहिले बने को साझा धारणा जस् तै सबै को साथ भएमा आउदो वर्षदे खि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नसक्ने यो जनाहरु निर्माण गरी अगाडि बढ्ने संकल्प लिएका छौ  । हामीले भौ तिक विकास निर्माण गरे र मात्रै दाङलाई समृद्ध बनाउन सक्दै नांै  । हामीले भौ तिक विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासलाई स“गस“गै अगाडि बढाउन खो जे का छौ ं । यी चारवटा पक्षको विकास स“गस“गै लग्न सके दाङलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । तर दाङ यी चार पक्षको विकासमा कमजो र छ । यसका लागि सबै तहहरुले प्राथमिकता यो जनाका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
Previous: पचास बिघाको तरकारी खेती नष्ट
Next: सहकारीमार्फत उद्योग सञ्चालन